भानु सर्किट निर्माणका लागि एनआरएनएलाई सहकार्य गर्न प्रज्ञाको प्रस्ताव – Dcnepal
प्रकाशित : २०७७ असार २९ गते १३:३२
काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए) ले २०७ औं भानु जयन्ती एवं अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषा दिवस एक विशेष कार्यक्रम गरी मनाएको छ ।
संघ मातहतको भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा सम्पदा प्रवद्र्धन समितिले आइतवार अनलाईनमार्फत भानु जयन्ती एवं अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषा दिवसमा विशेष कार्यक्रम गरेको हो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि एवं नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङले एनआरएन र प्रतिष्ठानले एकापसमा सहकार्य गरेर भाषा, साहित्यको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सक्ने बताए ।
प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने भानुभक्त पुरस्कारका लागि एनआरएनलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै उहाँले भानु सर्किट निर्माणका लागि प्रतिष्ठान एनआरएनएसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
नउपकुलपति गुरुङले भानु जयन्तीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषा दिवसका रुपमा मनाउन प्रतिष्ठानको तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तले एनआरएन नेपाली भाषा, साहित्यको प्रवद्र्धनका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । अध्यक्ष पन्तले पुरस्कारका लागिसहयोग गर्ने र भानु सर्किटको प्रस्तावबारे छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए ।
एनआरएनका संस्थापक एवं पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले आफ्नो कार्यकालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान र एनआरएनबीच आपसी सहकार्य गरेर जाने सम्झौता भएकाले सोही अनुसार अघि बढ्न सुझाव दिए ।
एनआरएन भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा सम्पदा प्रवद्र्धन समितिका अध्यक्ष हिक्मत थापाले स्वागत गरेको कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य डा. हेमनाथ पौडेल, प्रतिष्ठानका पूर्व सदस्यसचिव डा. तुलसीप्रसाद भट्टराई, भाषाविद प्राध्यापक डा.माधवप्रसाद पोखरेल, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका संस्थापक अध्यक्ष होमनाथ सुवेदीलगायतले आ-आफ्नो धारणा राखे ।
यसैगरी रुसमा बसेर लामो समयदेखि नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा योगदान दिइरहेका कृष्णप्रकाश श्रेष्ठ, नेपालीभाषी भुटानी मूलका साहित्यकार डा. लक्ष्मीनारायण ढकाल हाल अमेरिका र म्यान्मारमा रहेका नेपालीभाषी साहित्यकार प्रवीणहरि प्रधान ‘भिक्टर’ लगायतका प्राज्ञ एवं साहित्यकारले नेपाली भाषाको एकीकरणमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको योगदान, नेपाली भाषा साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न भैरहेका प्रयास र यसका चुनौती एवं गैर आवासीय नेपालीले भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा गरिरहेको योगदानका बारे चर्चा गरेका थिए ।
करिब तीन घण्टा लामो कार्यक्रमको संचालन समितिकी सदस्य सचिव एवं प्रवासी प्रवाह कार्यक्रमकी संचालक भगवती बस्नेत र समितिका मिडिया कोअर्डिनेटर गौतम दाहालले गरेका थिए ।